တယ်လီဖုန်း အင်္ဂလိပ်စာ - Myanmar Network
Posted by Language Republic on March 12, 2015 at 11:49 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ ကုမ္ပဏီ၊ ရုံးဌာန၊ အရောင်းဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေသူ ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဘယ်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ကို ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အခါ ဖုန်းပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမှာ တွန့်ဆုတ်ဖူးပါသလား။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ့် ဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့ စကားတစ်ခုခု အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါ ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘဲ စကားလုံးတွေ ထွက်မလာတော့တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ပေးလိုတဲ့ အကြံတစ်ခုကတော့ အင်္ဂလိပ်လို တယ်လီဖုနုး ပြောတာကို များများလေ့ကျင့်ဖို့ပါဘဲ။ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူတွေအတွက် Telephone English ခေါ်တဲ့ လေ့လာစရာ သင်ခန်းစာ ဆောင်းပါးတွေ အခုအခါ အများကြီးရှိတာမို့ သေသေချာချာ လေ့လာပြီး လေ့ကျင့်ရင် ဒီလိုမျိုး ဖုန်းပြောရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ ကြောက်စိတ်တွေ ပျောက်ကွယ်သွားမှာအမှန်ပါဘဲ။
တယ်လီဖုန်းပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရတာ ခက်ခဲတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့က တစ်ဖက်က ဖုန်းပြောသူရဲ့ ပါးစပ်၊ မျက်လုံး၊ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားပုံ စတာတွေကို မမြင်ရတာလည်း ပါပါတယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြောတဲ့အခါ သူပြောတာကို သူ့ရဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပုံ (body language) အပါအဝင် မျက်မှောင်ကြုတ်ခြင်း၊ ပြုံးခြင်း စသည်ကို ကြည့်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူလို့ ရသလို သူ့ကိုလည်း ကိုယ့်ရဲ့ အမူအယာတွေနဲ့ စကားပြောလို့ ရပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ ပြောရတာရဲ့ ခြားနားချက်ကတော့ သင်က မဖြစ်မနေ စကားနဲ့ပဲ ပြန်ပြောရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ တယ်လီဖုန်းပြောတဲ့အခါ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ ယုံကြည်မှုရှိရှိပြောနိုင်ဖို့ အောက်ပါ အကြံပြုချက်တွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
၁။ ဖြေးဖြေးနဲ့ ရှင်းရှင်းပြောပါ။
ဖုန်းနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ အခက်အခဲကတော့ တစ်ဖက်လူကို မမြင်ရတာပဲ။ ပိုပြီးဆိုးတာက ကိုယ်ပြောချင်တာကို တစ်ဖက်က လူနားလည်အောင် ပြောရတာပါဘဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ အသံထွက်တွေက မမှန်ရင်လည်း ဖုန်းပြောရတာအခက်အခဲ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းပြောတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို ဂရုစိုက်ပြီး ပြုပြင်ပါ (ဥပမာ- /l/ အသံ၊ /r/ အသံ၊ /s/ အသံ၊ /z/ အသံ၊ /b/ အသံနဲ့ /v/ အသံတွေ)။
ဖုန်းမှာ အင်္ဂလိပ်လို စကားပြောရတဲ့အခါ ကြောက်လာပြီဆိုရင် မြန်မြန် ပြောတတ်ကြပါတယ်။ မြန်မြန်ပြောတဲ့အခါ အသံတွေ လုံးပြီး တစ်ဖက်လူက ဘာမှ နားလည်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ဖြေးဖြေးပြောသင့်ပါတယ်။ သင်ပြောချင်တဲ့ စကားတွေကို ဖုန်းမပြောခင် အကြ်ိမ်ကြိမ် လေ့ကျင့်ပြောကြည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ချရေးထားပြီး ဖတ်ရင်းပြောပါ။ ဖုန်းမခေါ်ခင်၊ ပြန်မထူးခင် အသက်ကို ဝဝရှုပါ။
၂။ တစ်ဖက်လူပြောတာကို နားလည်အောင် အရင်လုပ်ပါ။
ဖုန်းမှာ တစ်ဖက်လူပြောသမျှ အားလုံးကို နားလည်သလို ဟန်မဆောင်ပါနှင့်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို မိခင်စကားအနေနဲ့ ပြောသောသူ (native speaker) တိုင်း သူတို့အချင်းချင်း စကားပြောတဲ့အခါ နားမလည်တာတွေရှိရင် ပြန်ပြောခိုင်းတာ၊ မေးခွန်းတွေ ပြန်မေးတာတွေ လုပ်ပါတယ်။ ကိုယ်က တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အမှာစကား ထားခဲ့တာကို လိုက်မှတ်ရတဲ့အခါမှာ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်နားမလည်၊ ကောင်းကောင်းမကြားလိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လို ပြန်မေးရသလဲဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းတွေကို ကျက်မှတ် လေ့ကျင့်ထားပါ။ နောက်ပြီး တစ်ဖက်က စကားပြောသူကို ဖြေးဖြေးပြောခိုင်းဖို့လည်း မကြောက်ပါနှင့်။ အခြားဆူညံသံတွေနဲ့ ဝေးရာမှာနေပြီး ဖုန်းပြောပါ။ ဒါမှ တစ်ဖက်က စကားကို အနှောက်အယှက်မရှိ နားထောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ သူငယ်ချင်းနှင့် လေ့ကျင့်ပါ။
ဝါသနာတူ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးဦးနှင့် ဖုန်းပြောဆိုပုံကို အတူတွဲပြီး လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။ ပထမ မျက်နှာချင်းဆိုင် လေ့ကျင့်ပါ။ နောက်ပြီးတော့ ကျောပေးထိုင်ပြီး တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက် မမြင်စေဘဲ ပြောကြည့်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ အကာအကွယ် တစ်ခုခုခြားပြီး အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ အော်ပြောပြီး လေ့ကျင့်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ တစ်ကယ့် ဖုန်းနဲ့ ပြောကြည့်ပါ။ ဒီလိုဖုန်းနဲ့ လေ့ကျင့်ရာမှာ တစ်ဖက်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်၊ ဘယ်နေ့တွေမှာ စသည်ဖြင့် အချိန်သတ်မှတ်ပြီး တစ်ယောက်တစ်လှည့် ဖုန်းဆက်ပါ။ တစ်ခါ စကားပြောရင် အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်ခန့် ပြောပါ။ ပြောစရာ အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပြီး social talk ၊ business talk စသည်ဖြင့် role play ပုံစံ သရုပ်ဆောင်ပြီး ပြောပါ။ ဖုန်းနဲ့ လေ့ကျင့်ဖို့ မလွယ်ရင် ကျောပေးထိုင် လေ့ကျင့်တဲ့ ပုံစံကို သုံးပါ။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ တစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာ အမူအရာ နှုတ်ခမ်းလှုပ်ရှားမှုတွေကို တစ်ယောက်က မမြင်မိစေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၄။ တယ်လီဖုန်း စည်းကမ်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကို လိုက်နာပါ။
သင့်မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ စကားပြောဆိုပုံနှင့် သင့် စီးပွားဖက်၊ သင့် အရာရှိ၊ သင့် customer များ၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များနှင့် စကားပြောဆိုပုံက ကွာခြားပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှု မတူတဲ့ သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုက တစ်ချို့ သာမန် အပြုအမူ (ဒီမှာတော့ အပြောအဆို) တွေက တစ်ဖက်လူကို စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ် (သို့မဟုတ်) စိတ်ပျက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ သင်က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တဲ့တိုး စကားပြောတာကို ပညာသားပါပါနဲ့ formal language ကို မသုံးခဲ့ရင် တစ်ဖက်က လူက 'ရိုင်းစိုင်းလှချည်လား' လို့ ထင်သွားနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ယဉ်ကျေးမှုကို ပြသတဲ့အနေနဲ့ “could” တို့ “may” တုိ့ စတဲ့ modal တွေကို စကားမှာထည့်ပြောရပါတယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြောရင်လည်းဒီ modal တွေက်ိုဘဲ သုံးရတာ မဟုတ်ပါလား။ ဖုန်းထူးတဲ့အခါ စကားကို ဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်မှန်ဖြေသလိုဘဲ အဆုံးသတ်မှာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ goodbye ထည့်ပြောဖို့ မဖြစ်မနေ အချိန်ပေးပြီး လေ့ကျင့်ပါ။ နောက်ပြီးတော့ casual manner နဲ့ စကား ဘယ်လိုစပြောရမလဲ၊ စကားဘယ်လို အဆုံးသတ်ရမလဲ ဆိုတာတွေကို ကျက်မှတ် လေ့ကျင့်ပါနော်။
၅။ ရက်စွဲတွေ၊ နံပါတ်တွေကိုလေ့ကျင့်ပါ။
English phonetic spelling တွေကို လေ့ကျင့်ရတာ လွယ်ကူပါတယ်။ ဒီစာလုံးပေါင်းတွေက တစ်ခုခု စာလုံးပေါင်းမရှင်းရင် ပြန်လည်မေးမြန်းတဲ့အခါ အထူးအသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒီ phonetic spelling တွေကို အောက်မှာ သက်သက် ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဒီစာလုံးပေါင်းတွေက နိုင်ငံတစ်ကာက လက်ခံ နားလည်ထားတာတွေဖြစ်လို့ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ရက်စွဲတွေ၊ နံပါတ်တွေကို အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ပြောပြီးလေ့ကျင့်ပါ။ လေ့ကျင့်ဖို့ကတော့ သင်နဲ့ သင့်သူငယ်ချင်းတို့က ရက်စွဲတွေ၊ နံပါတ်တွေကို list ချရေးပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖုန်းမှတဆင့် ပြောပါ။ ကိုယ်ကြားခဲ့တာတွေကို ချရေးပြီး မှတ်ထားပါ။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကိုယ်ကြားခဲ့တဲ့ ရက်စွဲတွေ၊ နံပါတ်တွေ မှန်သလား ဆိုတာ ချရေးထားတဲ့ list တွေနဲ့ ပြန်တိုက်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
အောက်မှာတော့ ဖုန်းပြောရင် အသုံးဝင်မယ့် အသုံးအနှုန်းတွေကို လေ့ကျင့်ဖို့ စုစည်းဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အသံထွက် လေ့ကျင့်ကြည့်ပါနော်။
Answering the phone (ဖုန်းထူးခြင်း)
Thank you for calling. Sai speaking. How can I help you?
Introducing yourself (မိမိကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ခြင်း)
Hi, it's Gerry from the exams office here.
This is she.* (ဟုတ်ကဲ့ ပြောနေပါတယ်)
Speaking.* (ဟုတ်ကဲ့ ပြောနေပါတယ်)
*တစ်ဖက်က ဖုန်းပြောသူ က မိမိအသံကို မမှတ်မိတဲ့ အခါ ပြောရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Asking to speak with someone (တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဖုန်းပြောဖို့တောင်းဆိုခြင်း)
Is Fred in? (informal) (ဖရက် ရှိလား)
Is Jackson there, please? (informal)( ဂျက်ဆင် ရှိလား)
Can I talk to your sister? (informal) (စကားပြောခွင့်ရမလား)
May I speak with Mr. Green, please? (စကားပြောခွင့်ရမလား)
Would the doctor be in/available? (စကားပြောခွင့်ရမလား)
Connecting someone (ဖုန်းလွှဲပေးခြင်း)
Justasec. I'll get him. (informal) (ခဏလေးနော်။ ဖုန်းလွှဲပေးမယ်။)
Hang on one second. (informal) (ခဏလေးနော်။)
Please hold and I'll put you through to his office. (ခဏလေးနော်။ သူ့ရုံးခန်းကို ဖုန်းလွှဲပေးမယ်။)
One moment please. (ခဏလေးနော်။)
All of our operators are busy at this time. Please hold for the next available person. (အော်ပရေတာတွေ မအားသေးလို့နောက်တစ်ယောက်ထူးမဲ့အလှည့် ကိုခဏစောင့်ပေးပါနော်)
Making special requests (တောင်းဆိုမှုပြု ခြင်း)
Could you please repeat that? (ပြန်ပြောလို့ရမလား)
Would you mind spelling that for me? (စာလုံးပေါင်းပေးလို့ရမလား)
Could you speak upalittle please? (နည်းနည်း ကျယ်ကျယ် ပြောပေးလို့ရမလား)
Can you speakalittle slower please? My English isn't very strong. (နည်းနည်း ဖြေးဖြေး ပြောပေးလို့ရမလား။ ကျွန်တော့အင်္ဂလိပ် သိပ်မကောင်းဘူး။)
Can you call me back? I think we haveabad connection. (ပြန်ခေါ်ပေးပါလား။ လိုင်းမကောင်းလို့ပါ။)
Can you please hold foraminute? I have another call. (ခဏကိုင်ထားပါ။ နောက်ဖုန်းတစ်ခုဝင်လာလို့။)
Takingamessage for someone (တစ်ယောက်ယောက် ကိုယ်စား ဖုန်းလက်ခံပေးခြင်း)
Sammy's not in. Who's this? (informal) (ဆမ်မီ မရှိပါဘူး။ ဘယ်သူ ဆက်တာပါလဲ။)
I'm sorry, Lisa's not here at the moment. Can I ask who's calling? (ဘယ်သူ ဆက်တာပါလဲ။)
I'm afraid he's stepped out. Would you like to leaveamessage? (သူမရှိပါဘူး ခင်ဗျား၊ ဘာမှာခဲ့ချင်ပါသလဲ။)
He's on lunch right now. Who's calling please? (သူ ထမင်းစားသွားပါတယ်။ ဘယ်သူ ဆက်တာပါလဲ။)
He's busy right now. Can you call again later? (သူအလုပ်များနေပါတယ်။ ခဏနေရင် ပြန်ခေါ်ပေးပါ။)
I'll let him know you called. (ခင်ဗျား ဖုန်းဆက်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါမယ်။)
I'll make sure she gets the message. (စိတ်ချပါ၊ ကျွန်တော် သူ့ကို ပြောလိုက်ပါ့မယ်။)
Leavingamessage with someone (တစ်ယောက်ယောက် အတွက် အမှာထားခဲ့ခြင်း)
Yes, can you tell him his wife called, please. (သူ့ဇနီးဆက်တယ်လို့ ပြောပေးပါ။)
No, that's okay, I'll call back later. (ကိစ္စမရှိဘူး၊ နောက်မှ ပြန်ခေါ်မယ်။)
Yes, it's James from British Council here. When do you expect her back in the office? (သူ ဘယ်တော့ ရုံးကို ပြန်ရောက်မှာလဲ။)
Thanks, could you ask him to call Brian when he gets in? (သူပြန်လာရင် ပြန်ဆက်ခိုင်းပေးပါ။)
Do you haveapen handy. I don't think he has my number. (ရေးစရာ အနားမှာရှိလား။ ကျွန်တော့်နံပါတ်ကို ခေါ်ပေးမယ်။)
Confirming information (သေချာအောင် ပြန်ပြောခြင်း)
Okay, I've got it all down. (ရပြီ၊ ကျွန်တော် ချရေးလိုက်ပြီ။)
Let me repeat that just to make sure. (သေခြာအောင် ကျွန်တော် ပြန်ပြောမယ်နော်။)
Did you say 555 Charles St.? (ဒီလိပ်စာနော်။)
You said your name was John, right? (ခင်ဗျား က ဂျွန်နော်။)
I'll make sure he gets the message. (စိတ်ချပါ၊ ကျွန်တော် သူ့ကို ပြောလိုက်ပါ့မယ်။)
Finishingaconversation (စကားအဆုံးသတ်ခြင်း)
Well, I guess I better get going. Talk to you soon. (ကျွန်တော် သွားရတော့မယ်၊ နောက်မှ ပြောကြတာပေါ့။)
Thanks for calling. Bye for now. (ဖုန်းဆက်တဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
I have to let you go now. (ခင်ဗျားကိုလည်း အကြာကြီး ဆွဲမထားတော့ပါဘူး။)
I have another call coming through. I better run. (နောက်ဖုန်း တစ်ခု ဝင်လာပြီ၊ ဒါဘဲနော်။)
I'm afraid that's my other line. (အဲ့ဒါက ကျွန်တော်ရဲ့ နောက်ဖုန်းလိုင်း တစ်လိုင်း)
I'll talk to you again soon. Bye. (နောက်မှ ထပ်ဆက်လိုက်မယ်၊ ဒါဘဲနော်။)
English phonetic spelling alphabet တွေနဲ့စာလုံးပေါင်းပြခြင်း
တစ်ခါတစ်လေ ဆူညံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြောတဲ့အခါ မကြားလိုက်ရတဲ့ စကားလုံးတွေကို English phonetic spelling alphabet တွေသုံးပြီး စာလုံးပေါင်းပြရပါတယ်။ English phonetic spelling alphabet တွေကိုအောက်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဥပမာ Club ကိုစာလုံးပေါင်းပြချင်ရင် ဒီလိုပြောရပါတယ်။ "C for Charlie, L for Lima, U for Uniform, B for Bravo." သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။
Englishclub.com မှ Telephone English ဆောင်းပါးမှ ကိုးကာဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးကို ဒီနေရာ (https://www.englishclub.com/speaking/telephone.htm) တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
နိုငျငံခွားသားတှနေဲ့ ဆကျဆံရတဲ့ ကုမ်ပဏီ၊ ရုံးဌာန၊ အရောငျးဆိုငျမှာ အလုပျလုပျသောကွောငျ့ဖွဈစေ၊ ကိုယျတိုငျက နိုငျငံခွားသားတှနေဲ့ အလုပျလုပျနသေူ ဖွဈသောကွောငျ့ဖွဈစေ၊ ဘယျအကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ပဲ ဖွဈဖွဈ နိုငျငံခွားသားတဈယောကျကို ဖုနျးနဲ့ ဆကျသှယျဖို့ လိုအပျတဲ့အခါ ဖုနျးပျေါမှာ အင်ျဂလိပျလိုပွောရမှာ တှနျ့ဆုတျဖူးပါသလား။
တဈခါတဈရံမှာ ကိုယျ့ ဘာသာစကားမဟုတျတဲ့ စကားတဈခုခု အထူးသဖွငျ့ အင်ျဂလိပျစကားပွောတဲ့အခါ ဘာပွောရမှနျးမသိတော့ဘဲ စကားလုံးတှေ ထှကျမလာတော့တာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒီအတှကျ ပေးလိုတဲ့ အကွံတဈခုကတော့ အင်ျဂလိပျလို တယျလီဖုနျုး ပွောတာကို မြားမြားလကေ့ငျြ့ဖို့ပါဘဲ။ အင်ျဂလိပျစာ လလေ့ာသူတှအေတှကျ Telephone English ချေါတဲ့ လလေ့ာစရာ သငျခနျးစာ ဆောငျးပါးတှေ အခုအခါ အမြားကွီးရှိတာမို့ သသေခြောခြာ လလေ့ာပွီး လကေ့ငျြ့ရငျ ဒီလိုမြိုး ဖုနျးပွောရငျ ဖွဈတတျတဲ့ ကွောကျစိတျတှေ ပြောကျကှယျသှားမှာအမှနျပါဘဲ။
တယျလီဖုနျးပျေါမှာ အင်ျဂလိပျလိုပွောရတာ ခကျခဲတဲ့ အကွောငျးရငျးကတော့ ကြှနျတျောတို့က တဈဖကျက ဖုနျးပွောသူရဲ့ ပါးစပျ၊ မကျြလုံး၊ ခန်ဓာကိုယျလှုပျရှားပုံ စတာတှကေို မမွငျရတာလညျး ပါပါတယျ။ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ စကားပွောတဲ့အခါ သူပွောတာကို သူ့ရဲ့ ကိုယျလကျလှုပျရှားပုံ (body language) အပါအဝငျ မကျြမှောငျကွုတျခွငျး၊ ပွုံးခွငျး စသညျကို ကွညျ့ပွီး အဓိပ်ပါယျကောကျယူလို့ ရသလို သူ့ကိုလညျး ကိုယျ့ရဲ့ အမူအယာတှနေဲ့ စကားပွောလို့ ရပါတယျ။ ဖုနျးနဲ့ ပွောရတာရဲ့ ခွားနားခကျြကတော့ သငျက မဖွဈမနေ စကားနဲ့ပဲ ပွနျပွောရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီတော့ တယျလီဖုနျးပွောတဲ့အခါ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ ယုံကွညျမှုရှိရှိပွောနိုငျဖို့ အောကျပါ အကွံပွုခကျြတှကေို ပွောပွခငျြပါတယျ။
၁။ ဖွေးဖွေးနဲ့ ရှငျးရှငျးပွောပါ။
ဖုနျးနဲ့ စကားပွောတဲ့အခါ ကွုံတှရေ့တတျတဲ့ အခကျအခဲကတော့ တဈဖကျလူကို မမွငျရတာပဲ။ ပိုပွီးဆိုးတာက ကိုယျပွောခငျြတာကို တဈဖကျက လူနားလညျအောငျ ပွောရတာပါဘဲ။ ကိုယျ့ရဲ့ အသံထှကျတှကေ မမှနျရငျလညျး ဖုနျးပွောရတာအခကျအခဲ ဖွဈစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဖုနျးပွောတဲ့အခါ သငျ့ရဲ့ အားနညျးခကျြကို ဂရုစိုကျပွီး ပွုပွငျပါ (ဥပမာ- /l/ အသံ၊ /r/ အသံ၊ /s/ အသံ၊ /z/ အသံ၊ /b/ အသံနဲ့ /v/ အသံတှေ)။
ဖုနျးမှာ အင်ျဂလိပျလို စကားပွောရတဲ့အခါ ကွောကျလာပွီဆိုရငျ မွနျမွနျ ပွောတတျကွပါတယျ။ မွနျမွနျပွောတဲ့အခါ အသံတှေ လုံးပွီး တဈဖကျလူက ဘာမှ နားလညျတော့မှာ မဟုတျပါဘူး၊ ဒါကွောငျ့ ဖွေးဖွေးပွောသငျ့ပါတယျ။ သငျပွောခငျြတဲ့ စကားတှကေို ဖုနျးမပွောခငျ အွကျိမျကွိမျ လကေ့ငျြ့ပွောကွညျ့ပါ။ ဒါမှမဟုတျ ခရြေးထားပွီး ဖတျရငျးပွောပါ။ ဖုနျးမချေါခငျ၊ ပွနျမထူးခငျ အသကျကို ဝဝရှုပါ။
၂။ တဈဖကျလူပွောတာကို နားလညျအောငျ အရငျလုပျပါ။
ဖုနျးမှာ တဈဖကျလူပွောသမြှ အားလုံးကို နားလညျသလို ဟနျမဆောငျပါနှငျ့။ အင်ျဂလိပျဘာသာကို မိခငျစကားအနနေဲ့ ပွောသောသူ (native speaker) တိုငျး သူတို့အခငျြးခငျြး စကားပွောတဲ့အခါ နားမလညျတာတှရှေိရငျ ပွနျပွောခိုငျးတာ၊ မေးခှနျးတှေ ပွနျမေးတာတှေ လုပျပါတယျ။ ကိုယျက တဈစုံတဈယောကျရဲ့ အမှာစကား ထားခဲ့တာကို လိုကျမှတျရတဲ့အခါမှာ ပိုအရေးကွီးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျနားမလညျ၊ ကောငျးကောငျးမကွားလိုကျတဲ့အခါ ဘယျလို ပွနျမေးရသလဲဆိုတဲ့ အင်ျဂလိပျအသုံးအနှုနျးတှကေို ကကျြမှတျ လကေ့ငျြ့ထားပါ။ နောကျပွီး တဈဖကျက စကားပွောသူကို ဖွေးဖွေးပွောခိုငျးဖို့လညျး မကွောကျပါနှငျ့။ အခွားဆူညံသံတှနေဲ့ ဝေးရာမှာနပွေီး ဖုနျးပွောပါ။ ဒါမှ တဈဖကျက စကားကို အနှောကျအယှကျမရှိ နားထောငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
၃။ သူငယျခငျြးနှငျ့ လကေ့ငျြ့ပါ။
ဝါသနာတူ သူငယျခငျြးတဈဦးဦးနှငျ့ ဖုနျးပွောဆိုပုံကို အတူတှဲပွီး လကေ့ငျြ့ကွညျ့ပါ။ ပထမ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ လကေ့ငျြ့ပါ။ နောကျပွီးတော့ ကြောပေးထိုငျပွီး တဈယောကျမကျြနှာ တဈယောကျ မမွငျစဘေဲ ပွောကွညျ့ပါ။ နောကျတဈဆငျ့အနနေဲ့ အကာအကှယျ တဈခုခုခွားပွီး အသံကယျြကယျြနဲ့ အျောပွောပွီး လကေ့ငျြ့ပါ။ နောကျဆုံးမှာတော့ တဈကယျ့ ဖုနျးနဲ့ ပွောကွညျ့ပါ။ ဒီလိုဖုနျးနဲ့ လကေ့ငျြ့ရာမှာ တဈဖကျကို ဘယျနှဈကွိမျ၊ ဘယျနတှေ့မှော စသညျဖွငျ့ အခြိနျသတျမှတျပွီး တဈယောကျတဈလှညျ့ ဖုနျးဆကျပါ။ တဈခါ စကားပွောရငျ အနညျးဆုံး ၁၅ မိနဈခနျ့ ပွောပါ။ ပွောစရာ အကွောငျးအရာတှကေိုလညျး ရှေးခယျြသတျမှတျပွီး social talk ၊ business talk စသညျဖွငျ့ role play ပုံစံ သရုပျဆောငျပွီး ပွောပါ။ ဖုနျးနဲ့ လကေ့ငျြ့ဖို့ မလှယျရငျ ကြောပေးထိုငျ လကေ့ငျြ့တဲ့ ပုံစံကို သုံးပါ။ အရေးကွီးဆုံးကတော့ တဈယောကျရဲ့ မကျြနှာ အမူအရာ နှုတျခမျးလှုပျရှားမှုတှကေို တဈယောကျက မမွငျမိစဖေို့ အရေးကွီးပါတယျ။
၄။ တယျလီဖုနျး စညျးကမျးနှငျ့ ယဉျကြေးမှုကို လိုကျနာပါ။
သငျ့မိတျဆှေ အပေါငျးအသငျးတှနေဲ့ စကားပွောဆိုပုံနှငျ့ သငျ့ စီးပှားဖကျ၊ သငျ့ အရာရှိ၊ သငျ့ customer မြား၊ လုပျဖျေါကိုငျဖကျမြားနှငျ့ စကားပွောဆိုပုံက ကှာခွားပါတယျ။ ယဉျကြေးမှု မတူတဲ့ သူတှနေဲ့ ဆကျဆံရတာဖွဈတဲ့အတှကျ ကိုယျ့ယဉျကြေးမှုက တဈခြို့ သာမနျ အပွုအမူ (ဒီမှာတော့ အပွောအဆို) တှကေ တဈဖကျလူကို စိတျကသိကအောကျဖွဈ (သို့မဟုတျ) စိတျပကျြစနေိုငျပါတယျ။ ဥပမာ သငျက ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး တဲ့တိုး စကားပွောတာကို ပညာသားပါပါနဲ့ formal language ကို မသုံးခဲ့ရငျ တဈဖကျက လူက 'ရိုငျးစိုငျးလှခညျြလား' လို့ ထငျသှားနိုငျပါတယျ။
တဈခါတဈလေ ယဉျကြေးမှုကို ပွသတဲ့အနနေဲ့ “could” တို့ “may” တုိ့ စတဲ့ modal တှကေို စကားမှာထညျ့ပွောရပါတယျ။ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ စကားပွောရငျလညျးဒီ modal တှကျေိုဘဲ သုံးရတာ မဟုတျပါလား။ ဖုနျးထူးတဲ့အခါ စကားကို ဖွေးဖွေးနဲ့ မှနျမှနျဖွသေလိုဘဲ အဆုံးသတျမှာ ယဉျယဉျကြေးကြေးနဲ့ goodbye ထညျ့ပွောဖို့ မဖွဈမနေ အခြိနျပေးပွီး လကေ့ငျြ့ပါ။ နောကျပွီးတော့ casual manner နဲ့ စကား ဘယျလိုစပွောရမလဲ၊ စကားဘယျလို အဆုံးသတျရမလဲ ဆိုတာတှကေို ကကျြမှတျ လကေ့ငျြ့ပါနျော။
၅။ ရကျစှဲတှေ၊ နံပါတျတှကေိုလကေ့ငျြ့ပါ။
English phonetic spelling တှကေို လကေ့ငျြ့ရတာ လှယျကူပါတယျ။ ဒီစာလုံးပေါငျးတှကေ တဈခုခု စာလုံးပေါငျးမရှငျးရငျ ပွနျလညျမေးမွနျးတဲ့အခါ အထူးအသုံးဝငျပါတယျ။ ဒီ phonetic spelling တှကေို အောကျမှာ သကျသကျ ဖျေါပွထားပါတယျ။ ဒီစာလုံးပေါငျးတှကေ နိုငျငံတဈကာက လကျခံ နားလညျထားတာတှဖွေဈလို့ အရမျးအသုံးဝငျပါတယျ။ နောကျပွီး ရကျစှဲတှေ၊ နံပါတျတှကေို အသံကယျြကယျြနဲ့ ပွောပွီးလကေ့ငျြ့ပါ။ လကေ့ငျြ့ဖို့ကတော့ သငျနဲ့ သငျ့သူငယျခငျြးတို့က ရကျစှဲတှေ၊ နံပါတျတှကေို list ခရြေးပွီး တဈယောကျကို တဈယောကျ ဖုနျးမှတဆငျ့ ပွောပါ။ ကိုယျကွားခဲ့တာတှကေို ခရြေးပွီး မှတျထားပါ။ ပွီးတော့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ကိုယျကွားခဲ့တဲ့ ရကျစှဲတှေ၊ နံပါတျတှေ မှနျသလား ဆိုတာ ခရြေးထားတဲ့ list တှနေဲ့ ပွနျတိုကျကွညျ့လို့ ရပါတယျ။
အောကျမှာတော့ ဖုနျးပွောရငျ အသုံးဝငျမယျ့ အသုံးအနှုနျးတှကေို လကေ့ငျြ့ဖို့ စုစညျးဖျေါပွပေးလိုကျပါတယျ။ အသံထှကျ လကေ့ငျြ့ကွညျ့ပါနျော။
Answering the phone (ဖုနျးထူးခွငျး)
Introducing yourself (မိမိကိုယျကိုမိတျဆကျခွငျး)
This is she.* (ဟုတျကဲ့ ပွောနပေါတယျ)
Speaking.* (ဟုတျကဲ့ ပွောနပေါတယျ)
*တဈဖကျက ဖုနျးပွောသူ က မိမိအသံကို မမှတျမိတဲ့ အခါ ပွောရတာ ဖွဈပါတယျ။
Asking to speak with someone (တဈစုံတဈယောကျကိုဖုနျးပွောဖို့တောငျးဆိုခွငျး)
Is Fred in? (informal) (ဖရကျ ရှိလား)
Is Jackson there, please? (informal)( ဂကျြဆငျ ရှိလား)
Can I talk to your sister? (informal) (စကားပွောခှငျ့ရမလား)
May I speak with Mr. Green, please? (စကားပွောခှငျ့ရမလား)
Would the doctor be in/available? (စကားပွောခှငျ့ရမလား)
Connecting someone (ဖုနျးလှဲပေးခွငျး)
Justasec. I'll get him. (informal) (ခဏလေးနျော။ ဖုနျးလှဲပေးမယျ။)
Hang on one second. (informal) (ခဏလေးနျော။)
Please hold and I'll put you through to his office. (ခဏလေးနျော။ သူ့ရုံးခနျးကို ဖုနျးလှဲပေးမယျ။)
One moment please. (ခဏလေးနျော။)
All of our operators are busy at this time. Please hold for the next available person. (အျောပရတောတှေ မအားသေးလို့နောကျတဈယောကျထူးမဲ့အလှညျ့ ကိုခဏစောငျ့ပေးပါနျော)
Making special requests (တောငျးဆိုမှုပွု ခွငျး)
Could you please repeat that? (ပွနျပွောလို့ရမလား)
Would you mind spelling that for me? (စာလုံးပေါငျးပေးလို့ရမလား)
Could you speak upalittle please? (နညျးနညျး ကယျြကယျြ ပွောပေးလို့ရမလား)
Can you speakalittle slower please? My English isn't very strong. (နညျးနညျး ဖွေးဖွေး ပွောပေးလို့ရမလား။ ကြှနျတော့အင်ျဂလိပျ သိပျမကောငျးဘူး။)
Can you call me back? I think we haveabad connection. (ပွနျချေါပေးပါလား။ လိုငျးမကောငျးလို့ပါ။)
Can you please hold foraminute? I have another call. (ခဏကိုငျထားပါ။ နောကျဖုနျးတဈခုဝငျလာလို့။)
Takingamessage for someone (တဈယောကျယောကျ ကိုယျစား ဖုနျးလကျခံပေးခွငျး)
Sammy's not in. Who's this? (informal) (ဆမျမီ မရှိပါဘူး။ ဘယျသူ ဆကျတာပါလဲ။)
I'm sorry, Lisa's not here at the moment. Can I ask who's calling? (ဘယျသူ ဆကျတာပါလဲ။)
I'm afraid he's stepped out. Would you like to leaveamessage? (သူမရှိပါဘူး ခငျဗြား၊ ဘာမှာခဲ့ခငျြပါသလဲ။)
He's on lunch right now. Who's calling please? (သူ ထမငျးစားသှားပါတယျ။ ဘယျသူ ဆကျတာပါလဲ။)
He's busy right now. Can you call again later? (သူအလုပျမြားနပေါတယျ။ ခဏနရေငျ ပွနျချေါပေးပါ။)
I'll let him know you called. (ခငျဗြား ဖုနျးဆကျတယျလို့ ပွောလိုကျပါမယျ။)
I'll make sure she gets the message. (စိတျခပြါ၊ ကြှနျတျော သူ့ကို ပွောလိုကျပါ့မယျ။)
Leavingamessage with someone (တဈယောကျယောကျ အတှကျ အမှာထားခဲ့ခွငျး)
Yes, can you tell him his wife called, please. (သူ့ဇနီးဆကျတယျလို့ ပွောပေးပါ။)
No, that's okay, I'll call back later. (ကိစ်စမရှိဘူး၊ နောကျမှ ပွနျချေါမယျ။)
Yes, it's James from British Council here. When do you expect her back in the office? (သူ ဘယျတော့ ရုံးကို ပွနျရောကျမှာလဲ။)
Thanks, could you ask him to call Brian when he gets in? (သူပွနျလာရငျ ပွနျဆကျခိုငျးပေးပါ။)
Do you haveapen handy. I don't think he has my number. (ရေးစရာ အနားမှာရှိလား။ ကြှနျတေျာ့နံပါတျကို ချေါပေးမယျ။)
Confirming information (သခြောအောငျ ပွနျပွောခွငျး)
Okay, I've got it all down. (ရပွီ၊ ကြှနျတျော ခရြေးလိုကျပွီ။)
Let me repeat that just to make sure. (သခွောအောငျ ကြှနျတျော ပွနျပွောမယျနျော။)
Did you say 555 Charles St.? (ဒီလိပျစာနျော။)
You said your name was John, right? (ခငျဗြား က ဂြှနျနျော။)
I'll make sure he gets the message. (စိတျခပြါ၊ ကြှနျတျော သူ့ကို ပွောလိုကျပါ့မယျ။)
Finishingaconversation (စကားအဆုံးသတျခွငျး)
Well, I guess I better get going. Talk to you soon. (ကြှနျတျော သှားရတော့မယျ၊ နောကျမှ ပွောကွတာပေါ့။)
Thanks for calling. Bye for now. (ဖုနျးဆကျတဲ့ အတှကျကြေးဇူးတငျပါတယျ။)
I have to let you go now. (ခငျဗြားကိုလညျး အကွာကွီး ဆှဲမထားတော့ပါဘူး။)
I have another call coming through. I better run. (နောကျဖုနျး တဈခု ဝငျလာပွီ၊ ဒါဘဲနျော။)
I'm afraid that's my other line. (အဲ့ဒါက ကြှနျတျောရဲ့ နောကျဖုနျးလိုငျး တဈလိုငျး)
I'll talk to you again soon. Bye. (နောကျမှ ထပျဆကျလိုကျမယျ၊ ဒါဘဲနျော။)
English phonetic spelling alphabet တှနေဲ့စာလုံးပေါငျးပွခွငျး
တဈခါတဈလေ ဆူညံတဲ့ပတျဝနျးကငျြမှာ ပွောတဲ့အခါ မကွားလိုကျရတဲ့ စကားလုံးတှကေို English phonetic spelling alphabet တှသေုံးပွီး စာလုံးပေါငျးပွရပါတယျ။ English phonetic spelling alphabet တှကေိုအောကျမှာဖျောပွလိုကျပါတယျ။
ဥပမာ Club ကိုစာလုံးပေါငျးပွခငျြရငျ ဒီလိုပွောရပါတယျ။ "C for Charlie, L for Lima, U for Uniform, B for Bravo." သဘောပေါကျမယျထငျပါတယျ။
Englishclub.com မှ Telephone English ဆောငျးပါးမှ ကိုးကာဘာသာပွနျထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
မူရငျးဆောငျးပါးကို ဒီနရော (https://www.englishclub.com/speaking/telephone.htm) တှငျ ဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
Permalink Reply by Sakura Yuki on March 12, 2015 at 14:00
Permalink Reply by Nan Thi Thi Win Than on March 12, 2015 at 19:34
Thankyou very much. May I know about TOFEL. How can I require about TOFEL? Any website? If you don't mind, please reply me.
Permalink Reply by Saw Yu Yu Wai on March 12, 2015 at 21:18
Permalink Reply by zin myo lwin on March 13, 2015 at 11:59
Permalink Reply by Eng Stu on March 13, 2015 at 12:00
Permalink Reply by Wai Myo Kyaw on March 13, 2015 at 16:46
Permalink Reply by Linn Htet Htet on March 13, 2015 at 22:51
Helpful and improve knowledge :)
Love to beaMyanmar network member.. <3
Permalink Reply by Khin Toe Lwin on March 31, 2015 at 12:11
Permalink Reply by Lai Yee on May 7, 2015 at 14:43
Permalink Reply by Kyawbobotun@jerrywong on June 18, 2015 at 14:28
Permalink Reply by June June on October 21, 2015 at 10:22
Permalink Reply by Aye Cho on June 23, 2017 at 12:45
Thaks for you kindness.